Otu IS ezobatala na Steeti ụfọdụ n’ala a-Ụlọọrụ Onyeisiala – hoo!haa!!
Abụja: Ozi si n’aka Ụlọọrụ Onyeisiala na-egosi na otu ogbueyiọhaegwu mbaụwa ndi Alakụba bụ Islamic State (IS) ezobatala na steeti ndi ụfọdụ n’ala a dịka Benuwe, Kogi nakwa Edo iji were malite ịkpa mkpamkpa nakwa ịla ndụ ndi mmadụ n’iyi.
Kaosinadi, ndi ọrụ nchekwa obodo ọkacha ndi ụlọrụ Department of State Services, DSS, ka a sịrị na ha na-esochi ihe ahụ azụ site na ileru anya na ihe ndi otu ahụ na-eme nakwa site n’ọgbụgbaama ha nwetara n’aka ndi ụfọdụ ha jidere soro were sụọ ndi Benuwe akwụ. N’akwụkwọ mkpesa ndi DSS degara Onyeisiala Muhammadu Buharị, ha chọpụtara na otu ogbueyiọhaegwu bụ Islamic State in West Africa (ISWA) ezobatawo na Naịjiriya.
Ebumnobi ndi otu a, dịka ozi ahụ siri kwu bụ ibute oke ọgbaghara n’etiti agbụrụ na agbụrụ nakwa n’etiti otu okpukpere na ibe ya site na ịtụkanye ogbunigwe n’ebe dịgasị iche iche ndi mmadụ juputara nakwa n’ọdọ mmanụ ụgbọala. Nke a ka a chọpụtara site n’aka ụfọdụ ndi Fulani na-achị ehi ejidere ejide, ndi nke na-enweghị asụsụ ndi Naịjiriya ọbụla
Ọgbụgba ama ndi ọrụ nchekwa nwetara gosiri na ndi a chọburu ibuso ndi mmadụ agha ma tụkwaa ogbunigwe n’ebe di iche iche n’oge mmemme ekeresimesi nakwa afọ ọhụrụ
Previous Post: ỤKWỤ
Next Post: Ọhaneze akatọọla otu komiti Osinbajọ maka ọgbaghara ndi na-achị ehi na ndi ọrụ ugbo